Qaybaha dumarka xagga ninka | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Qoyska Muslimka ah/Qaybaha dumarka xagga ninka
Islaamka wuxuu dhigay xeerar xukumaya xiriirka u dhexeyn ninka iyo haweenta ajanabiga ka ah
Haweenka xagga ninka waxay u qaybsamaan qaybo:
Inay tahay haweentu xaaskiisa
Waxaa u bannaan ninka inuu eego oo ugu raaxeysto xaaskiisa siduu doono, haweentuna way u bannaan tahay iyadana sidaas oo kale inay la yeesho ninkeeda, Allaah wuxuu ku sheegay inuu u yahay hu’ xaaskiisa, xaaskana hu’ u tahay ninkeeda, waana sawir ka bixin wanaagsan isku duubnidooda iyo xiriirkooda nafsiga iyo kalgaceylka iyo mid oogeed dhexdooda, Allaah kor ahaaye wuxuu yiri:
(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: 187)
“Waxay idin yihiin hu’, oo idinkuna hu’ baad u tihiin”. (Al-Baqarah: 187) (Eeg bogg 262)
Inay haweenta ka tahay ajanabi
Haweenta ajanabiga ah waa haweeney kasta oo aan ka mid ahayn maxaaramtiisa hadday ka mid tahay qaraabadiisa sida gabadha adeerkiis iyo gabadha eeddadiis ama gabadha abtigii ama gabadha habaryarti, iyo xaaska walaalki iyo qaraabooyinka reerka, ama yeysan ka mid ahaan qaraabadiisa oo yuusan la lahaan xiriir xigaalo ama xidid,
Islaamkuna wuxuu u yeelay shuruud iyo xeerar xiriirka uu ninka muslimka la lahaan karo haweenta ajanabiga ka ah dhowris ahaan xilaha iyo si loo awdo irdaha uu shaydaanka uga soo gali karo dadka, waayo Midka abuuray aadmiga baa dhab u ogsoon waxa anfacaya sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
“Miyuusan Kan abuuray aqoonin? Isagoo ah gun ogaha, ka War Haya (wax walba)”. (Al-Mulk: 14)
Inay ka mid tahay dumarka maxaaramtiisa ah
Waxaana loola jeedaa maxaarim haweeney kastoo ka xaaraan ah ninka inuu guursado xaaraantinimeyn abad ah, maxaarimtana waa kuwan:
Hooyadaa ku dhashay ama ayeeyda xagga aabbaha ama hooyada, sida hooyaadaa hooyadeed iyo aabbahaa hooyadi, haba kala kor jireene.
2 Gabadha aad dhashay ama gabadha uu dhalay wiilkaaga ama gabadha ay dhashay gabadhaada haba kala hooseeyaane.
3 Walaasha aad isku aabbaha iyo hooyada tihiin ama walaasha aad isku aabbaha tihiin ama walaasha aad isku hooyada tihiin.
4 Eeddadaa tooska ah oo ah aabbahaa walaashi ay isku aabbaha iyo hooyada yihiin ama isku aabbaha ama isku hooyada, waxaana soo galaya aabbaha eeddadi iyo hooyadaa eeddadeed.
5 Habaryarta tooska ah oo ah hooyadaa walaasheed ay isku aabbaha iyo hooyada yihiin, ama walaasheed xagga aabbaha ama hooyada, waxaana soo galaya aabbahaa habar yarti iyo hooyadaa habar yarteed.
6 Gabadha uu dhalay walaalkaa aad isku aabbaha iyo hooyada tihiin ama isku aabbaha ama isku hooyada, haba kala hooseeyaane sida gabadha uu dhalo wiilka uu dhalay walaalkaa.
7 Gabadha ay dhashay walaashaa aad isku aabbaha iyo hooyada tihiin ama isku aabbaha ama isku hooyada, haba kala hooseeyaane sida gabadha ay dhasho walaashaa gabadheed.
الصهر 8 Xaaska hooyadeed xaaskaa ha ahaato mid uu qabo markaa ama mid ay kala tageen, hooyadeed waxay ka mid tahay maxaarimtiisa abad, sidoo kale hooyada xaaskaaga hooyadeed.
9 Gabadha ay dhashay xaaskiisa uusan isagu dhalin.
10 Xaaska wiilka haba kala hooseeyaane sida xaaska wiilka wiilkaaga, iyo wiilka gabadha aad dhashay.
11 Xaaska aabbahaa haba sii kala korreeyaane sida xaaska aabbahaa aabbihi ama hooyadaa aabbaheed.
Hooyadaa xagga nuugmada, oo ah haweenta nuujisey labada sano ee hore ee dhalashadiisa laga billaabo dhalashadiisa shan nuugmo uu ka dhergo, wuxuu Islaamka siiyey xaq nuujinteeda darteed isaga.
Walaashaa xagga nuugmada, oo ah gabadha haweenta nuujisay intuu yaraa sida aan soo sheegnay, sidoo kale dhammaan qaraabada xagga nuugmada waa ka xaaraan sida xurmadda qaraabada xagga dhalashada, sida eeddada iyo habar yarta iyo gabadha walaalki xagga nuugmada iyo gabadha walaashi xagga nuugmada.